पछिल्लो समयमा अनलाइनमा धमाका मचाउने एरिकले बनाए ”मनको छाता” पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएकाका क्रिसल कडेँलको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। एरिक गिरीको शब्द, संगीत तथा स्वरमा रहेको मनको छाता बोलको गीतमा क्रिसलले अभिनय गरेका हुन्। उनी स्वयम् राम्रो गीत गाउने प्रतिभा भएता पनि उनीले म्युजिक भिडियो मार्फत अभिनयको सुरुवात गरेका छन्। उनको अभिनयको सुरुवात गराउने निर्देशक भद्रगोलका काकु अर्थात दिपक आचार्य रहेका छन्।
क्रिसलले सिनेमामा अभिनय गर्ने भन्ने खालको खबर केही समय अगाडि बाहिरिएको थियो। तर उनले आफ्नो अभिनय यात्राको सुरुवात म्य्ुजिक भिडियोबाट गरेका छन्। क्रिसललाई भिडियोमा याङ्सुले साथ दिएकी छन्। सागर मगर र पूजा राईको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा बुद्ध थापाको सिनेमेटोग्राफी रहेको छ।
हेर्नुहोस पुरा भिडियो :
संचारकर्मी भट्टराईको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
बारपाकमा रहेको तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको अवलोकन
झाडु लिएर राष्ट्रपति भण्डारी सफाई गर्न किन उत्रिइन् मैदानमा ? यस्तो छ रहस्य
भिमसेन थापा गाउँपालिका गोरखामा नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको शुभारम्भ
शाहरूख खानको फिल्म ‘डन ३’ मा चर्चित पोर्नस्टारको इन्ट्री !
मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरी ओम लेख्नुहोस भाग्य चम्किनेछ बेवास्ता नगर्नुहोला नत्र हानी होला ।143K Total Shares